मेक्सिको सिटी एक दोस्रो एप्पल स्टोर हुन सक्छ म म्याकबाट हुँ
मेक्सिको सिटी एक दोस्रो एप्पल स्टोर हुन सक्छ
गत सेप्टेम्बरमा हामीले सोया डे म्याकमा टिप्पणी गरेका थियौं खोल्दै मेक्सिको सिटी मा पहिलो एप्पल स्टोर। स्पष्ट रूपमा, एप्पल उस्तै विकासको साथ खुशी छ र एक देखि दुई वर्षको अन्तरालमा नयाँ रिटेल स्टोर खोल्ने योजना बनाइरहेको छ। कम्पनीले मापदण्ड र कुनै खास समय वा स्थान मा स्टोर खोल्न को लागी प्रक्रिया मा कहिल्यै नियम छ। यद्यपि परिसरको सर्तमा कम्पनीका आवश्यकताहरू, र साथै मूल्य माग जुन उनीहरूले माग गर्न सक्दछन् यदि मालिकलाई थाहा छ कि एप्पल लगानी पछाडि छ भने, सम्झौताको जटिल बनाउनु पर्छ।
थप रूपमा, यो विशेष स्टोर विशिष्ट सुविधाहरूको साथ डिजाइन गरिएको छ: प्रकृतिको एक मापदण्ड हुनुपर्दछ. छनौट गरिएको डिजाइन न्यू योर्कको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको एप्पल स्टोरसँग मिल्दोजुल्दो छ, केही महिना पहिले खोलियो, विशेष गरी पछिल्लो अगस्ट। कम्पनी मा एक ठूलो ठाउँ संग एक सम्झौता पुगेको थियो अन्तारा फेशन हल शपिंग सेन्टर। यो स्टोर शहर मा पहिलो एप्पल स्टोर को स्पेस को दोब्बर हुनेछ, र को सबै भन्दा प्रतिनिधि भाग मा अवस्थित छ सान्ता फे सेन्टर मार्फत, प्रतिष्ठित ब्रान्डले घेरिएको। शपिंग सेन्टर १० वर्ष पहिले यसको ढोका खोल्यो र शहर मा उच्च-अन्त र लक्जरी को एक मानकको रूपमा चिनिन्छ।
स्पष्ट रूपमा स्टोरमा प्रभावशाली तत्वहरू छन्: केही वास्तुकलासँग सम्बन्धित हुनेछ धेरै उच्च छत। टेक्नोलोजीको सट्टामा अरूहरू: यस्तो देखिन्छ कि यसले television०० इन्च भन्दा बढि टेलिभिजन देखाउनेछ। सम्भवतः यसको वितरणको दुई फ्लोरहरू छन्, वाणिज्य भागलाई जीनियस, प्रशिक्षण र उपकरण मर्मतका लागि आरक्षित स्थानबाट अलग गर्दै। यो वितरण एप्पल द्वारा रुचाईन्छ र यो स्टोरहरु मा जब यो सक्छ प्रयोग गर्दछ।
यद्यपि, अनुमानित खुल्ने मिति अज्ञात छ। यो शायद ढिलाइ हुनेछैन, किनकि पहिलो स्टोरले अधिग्रहण, सेवा, र बिक्रीमा एप्पलको उत्तम आपूर्ति ओभरफ्लो गर्यो। अफवाह यो छ कि एप्पल को अर्को चरण ब्राजिल मा एक अधिक तैनाती हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » मेक्सिको सिटी एक दोस्रो एप्पल स्टोर हुन सक्छ
एप्पलले म्याकोस १०.१२. bet बिटालाई विकासकर्ताहरूको लागि जारी गर्दछ
म्याकको लागि टेलिग्रामको नयाँ अपडेट, संस्करण २. 2.93.।